Uhambo lwe-Odisha Tour
Indawo yokuTyelela eOrissa - Ukutyelela e-Orissa
Sineqoqo leepakethi ezibandakanya amaziko okutyelela e-India kunye ne-North East, iMadhya Pradesh, iGujarat, Jharkhand, Maharashtra, kunye ne-West Bengal.Iiphakethi zezokhenketho ezifana ne-Odisha Textile Tour kunye ne-Golden Triangle zenziwe ngamacandelo amancinci athile eNuapatna naseManabandh, eyaziwa ngokuba yi-Ekat. Ngaphandle kwaloo ndawo, iidolophana ezingenanto ezifana neBadamba, iSambalpuri, iSagarpalli kunye ne-ButtuPalli, iChikiti kunye nePadmanavpur nazo zigqitywa njengeendawo zezotyelelo ze-Orissa ukuzonwabisa kwabo bakhenkethi nabangaphandle.
Sithole ukunconywa kwiindawo ezahlukeneyo zokulungiselela uhambo oluthile kwi-Golden Triangle ye-Odisha, i-viz, iBhubaneswar, Puri, Konark; Ecotour ukuya eBhitarkanika naseChilka; IiNdwendwe zeBuddhist 'Tour, IiNdwendwe zeTempile, iiPakethe zaseMaphandleni, iiNdwendwe zeeNdwendwe, iiNdwendwe zoKhenketho zoKomoya, iiveki zokuTyelela ngeeveki, iRathaYatra ipakethe ekhethekileyo, kunye nenqwelo-moya ekhangisa umoya wase Kolkata-Gangasagar-Sundarbans. Ipropati yepropati kunye neevenkile eziphantsi kweSand Pebbles zidibene neeJungle Resorts kunye neCrocodile ngokulandelanayo kwi-ecotourism indawo yaseBhitarkanika - ziindawo zokutyelela abavakhenkethi. Uhambo lwe-Orissa aluyi kuphinda lube lufanayo!
Nantsi iindawo eziphezulu zokuKhenketho e-Orissa ukuhlola.
IBuddhist Tour ye-Uttar Pradesh
Little Lahsa - Ithempeli legolide - Vaishno Devi
I-Volvo Iphakheji ye-Himanchal -Ex-Delhi
Fumana u Uttarakhand
Hlola u-Andaman Uhambo
Uhambo oluya kwi-Odisha